Sarimiaina Rosiana An’Aterineto Ao Amin’ny Hakantony Indrindra · Global Voices teny Malagasy
Sarimiaina Rosiana An'Aterineto Ao Amin'ny Hakantony Indrindra
Voadika ny 14 Jolay 2014 9:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, 日本語, polski, English
Dian'i Masyanya tany Budapest. Fizarana faha-121. YouTube.
Raha mieritreritra an'i Rosia ianao, inona no tonga ao an-tsaina? Angamba feno endrika manampahaizan'ny balafomanga, famantarana KGB, vodka, borsch, Poutine sy ny hafa ny lohanao. Na dia mety mieritreritra ballet sy literatiora aza raha mirona kolontsaina alohan'ny hiheverana ny Sarimiaina Rosiana an'Aterineto, saingy ity sehatra farany ity no nahatontosan'ny aterineto Rosiana zavatra mamirapiratra.
Folo taona mahery izao, namokatra sarimiaina mandeha amin'ny Flash” antsoina hoe “Masyanya.” i Oleg Kuvaev.”Anarana avy amin'ny mpilalao fototra ao anatiny no nangalana ny anaran'ilay tantara an-tsarimiaina mitohy an'aterineto, vehivavy avy ao Saint-Petersbourg eo amin'ny fiandohan'ny faha-roapolo taonany. Punk sady anarsista tamin'ny fahatanorany, renim-pianakaviana manan-janaka roa teo amin'ny fahalebiazany i Masyanya.
Araka ny filazan'i Kuvaev, noheverina ho vazivazy teo amin'ny samy mpinamana ny andian-tantara voalohany tamin'ny sarimiaina noforoniny. Avy eo, tamin'ny Septambra 2002, nanatona an'i Leonid Parfenov, mpanentana malaza amin'ny fahilavitra i Kuvaev mba ahafahany mandefa andian-tantara Masyanya amin'ny fiafaran'ny fandaharan'i Leonid amin'ny fahitalavitra. Naharitra nandritra ny tonontaona iray monja ny fiarahamiasa, saingy niteraka mpankafy an'i Masyanya kosa ny fandefasana azy tamin'izany.
Sarotra ny manazava ny laza lehiben'i Masyanya ao Rosia. Tokanamantany amin'ny endriny rehetra ilay sarimiaina. Mifantoka amin'i Masyanya sy ny namana roa, Hryundel et Lokhmaty ilay sarimiaina ary manome fijery tsy mahazatra amin'ny toe-javatra iainana isan'andro. Mampihomehy sy fampiasa andavanandro ny teny ampiasaina ao amin'ny tantara, ary afa-mirehareha amin'ny fomba firafitry ny sary ihany koa ny sarimianan'i Kuvaev.
(Masyanya mikarakara kafe maraina.)
Tsy isalasalana fa ny resaka ifanaovan'ny mpilalao ao anatiny no tena manintona aminy indrindra. Optimista hatramin'ny tsinaimaintiny i Masyanya, tia manao fandinihana filôzôfika amin'ny toe-javatra rehetra. Nilaza i Oxana Pobereinaia, mpanoratra ao amin'ny Feminismandreligion.com, fa fihaonan-dalan'ny Bodisma sy ny Feminisma ny fomba fiainan'i Masyanya. Tsy te-hahalala ireo fitsipika ara-tsosialy isan-karazany i Masyanya, ka ny filôzôfiany manokana no arahany. Tsy manaraka ny besinimaro izy: tsotsotra ny mariazin'i Masyanya, saingy nankalaza ny fisaraham-panambadiany tahaka ny lanonam-panambadiana izy, mahasanganehana hatrany ireo namany izy. Rehefa tsy misy ny vola, tsy mivarotra ny fananany na mitady asa fanampiny i Masyanya – fa mirotsaka an-tsehatra amin'ny fivarotam-boky tsy manana mpandray vola izy, izay amidy araka izay tononon'ny mpividy ny boky rehetra.
(Oops! More misadventures from Masyanya.)
Nisy ny fotoana, nanana ekipa mpamokatra horonantsary feno i Masyanya, ahitana mpampiaina maromaro, na dia niverina tamin'ny endriny voalohany aza ny tantara, izay anoratana, ampiainina ary ampitenenin'i Kuvaev ny rehetra ao anatiny. Hita ao amin'ny habaka ofisialin’ny fandaharana ireo fizarana vaovao, izay ahafahan'ireo mpitsidika mahita tantara an-tsarimiaina mitohy, lalao sy feon-dakolosy amin'ny fampisehoan'i Masyanya.